Oholela amabhange Thai ziyawusekela blockchain platform ukuthi kufakwe ekhompyutheni izinkontileka - Blockchain Izindaba
Mashi 20, 2018 admin
Oholela amabhange Thai ziyawusekela blockchain platform ukuthi kufakwe ekhompyutheni izinkontileka
Nane amabhange Thai ziye zazibandakanya ukudala Thailand Blockchain Community Initiative, okuzokwenza ukudijithaza izinhlamvu isiqinisekiso on a yesikhulumi blockchain wabelane, yasebhange eThailand emaphakathi umemezele ngoMsombuluko.
amabhange wezwe phezulu – Bangkok Bank, Krung Thai Bank, Siam Commercial Bank kanye Kasikornbank – ngeke zonke iqhaza isinyathelo, okuyinto isebenzisa Linux Foundation Hyperledger Indwangu njengendlela yesikhulumi ubuchwepheshe.
“Nale ukwabelana ingqalasizinda, amabhange akudingeki ukutshala bebodwa,” Veerathai Santiprabhob, umbusi Bank of Thailand, wathi esithangamini nabezindaba ngokuvumelana Nikkei. “Interoperability ithuthukisa ukusebenza kahle, kunciphisa nezindleko e komkhakha wethu wezezimali futhi esibhekela izidingo zomthengi kanye nomnikezi abamabhizinisi.”
Electricity Generating Authority of Thailand, inkampani kahulumeni amandla, futhi Siam Cement Group, inkampani ngobukhulu Thailand, womabili eselungela iqhaza kanye.
CFTC Commissioner isekela Winklevoss Abafowethu 'Crypto Self Regulatory Proposal
A cryptocur ezihlongozwayo ...
Bitfury kuvula Imayini Datacenter eNorway
I Bitfury Group ...
Previous Post:Bitfury kuvula Imayini Datacenter eNorway
Next Post:Imibhalo Snowden zembula NSA nentshisekelo ethungatha abasebenzisi Bitcoin
Binance inzuzo engaphezu kuka-Deutsche Bank e Q1 2018
ibhange ezinkulu Dubai sika iqala blockchain isheke iphrojekthi